Isbaheysi siyaasadeed xoogan oo dhan ka ah madaxweynaha Soomaaliya oo laga abaabulayo Nairobi Kenya. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Isbaheysi siyaasadeed xoogan oo dhan ka ah madaxweynaha Soomaaliya oo laga abaabulayo...
Isbaheysi siyaasadeed xoogan oo dhan ka ah madaxweynaha Soomaaliya oo laga abaabulayo Nairobi Kenya.
Sida websiteka xaqiiqa.com uu xog hoose kuhelayo ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo iskuku jiro madax in badan kusoo jirtay siyaasada Soomaaliya xilal kala duwana kasoo qabatay oo uu ka mid yahay Ra’iisal wasaarihi dowladi Sheekh shariif Ina Abdirashid Cali Sharmaake iyo Maslax siyaad bare iyo qaar kale oo xilal kasoo waayeen Dowlada Soomaaliya.
ayaaa haatan waxay kasoo horjeedaan dhaliil sanyihiina waxqabadka dowlada iyo sida ay wax uwado, iyaga oo kulamo balaaraan maalmahan la yeelanayo safiirada safaaradaha reer galbeedka, mareykan, iyo dowladaha carabta isla markaasna cabasha ka muujinaya Madaxweyne Xasan iyo dowladiisa.
Dhinaca kale waxaa lagu wadaa in madaxweyne Xasan booqasho ku yimaado magaalada Nairobi ee dalka Kenya isaga oo kulan la yeelan doono isbaheysiga mucaaradka dowladiisa oo hada aad uugu mashquulsan in madaxweyne Xasan iskaka tago xilka madaxtinimo.
Kala soco marwalba siyaasada qarsoon ee dalkaada Soomaaliya.
Previous articleQaraxyo mataana ah oo aad u culusay ayaa ka dhacay gagida dayuuradaha ee xerada qaxootiga Dhadhaab
Next articleMA KA HARAA?